Maxay tahay sababta madaxweyne Donald Trump loogu qabsaday sawirkan? - BBC News Somali
Maxay tahay sababta madaxweyne Donald Trump loogu qabsaday sawirkan?
19 Febraayo 2020
Sawirka ay sheegteen kooxda ololaha Trump
Madaxa ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump ayaa masaxay sawir uu soo dhigay barta Twiter-ka ee ololaha doorashada ee Madaxweynaha.
Sawirkan oo la qaaday sanadkii 2004, xilligaas oo madaxweyne George Bush uu booqday goob ay ka socotay tartanka baabuurta ayaan kooxda ololaha doorashada madaxweyne Trump waxay ka dhigeen in la qaaday tartan maalma kahor ka dhacay gobolka Florida oo uu Madaxweynaha ka qeybgalay.
Madaxa ololaha doorashada ee Trump, Brad Parscale ayaa bogga ololaha doorashada Trump ku qoray: "madaxweyne Trump waxaa uu ku guuleystay tartanka Daytona 500 oo aan wali bilaabanin".
Qoraalka iyo sawirka ayaa muujinaya diyaaradda khaaska ah ee Madaxweynaha Mareykanka oo ku dul duuleysa dad daawanaya tartanka baabuurta, waxaana barta Twiter-ka ee ololaha Trump ay ku jirtay muddo saddex saac ah kahor inta aanan laga saarin.
Sawirkan oo hadalheyn badan ka abuuray baraha bulshada ee Mareykanka ayaa inta aanan la saarin waxaa ka falcelisay ku dhawaad soddon kun oo qof.
Xigashada Sawirka, Jonathan Ferrey
Taageerayaasha Trump oo aan ogeyn sawirka iyo xilliga la qaaday ayaa aad ula dhacay sawirka iyo sida loo qaaday, waxaana ay uga falceliyeen qoraalo ay ku muujinayaan sida wanaagsan ee diyaaradda loo sawiray.
Dad badan ayaa Madaxweynaha iyo kooxdiisa ololaha doorashada ku dhaleceeyay in sawir uusan lahayn uu iska sheegto, ayna ka been sheegaan xilliga la qaaday.
Sawirkan ayaa waxaa qaaday sawir-qaade Jonathan Ferrey 15-kii bishii Febraayo ee sanadkii 2004-ka, xilligaas oo madaxweynihii hore ee Mareykanka, George W. Bush uu booqday goob ay ka socotay tartanka baabuurta.
Sawir-qaade Jonathan Ferrey oo xilligaas sawiray sawirkan ayaa mar qura waxaa u isla helay diyaaard oo kacday, kadibna ku aaday dadkii daawanayay tartanka oo ka dhacayay meel aan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee Daytona.
"Waxaan leeyahay saaxiibo badan oo aqoon u leh sawir qaadida tartanka Daytona 500 ee sanadkan," ayuu yiri Ferrey oo la hadlayay telefishenka CNN ee dalka Mareykanka.
Wuxuu intaa raaciyay in maanta uusan halkaas ku sugneyn, balse sawir qaadaha tartankii 2004 uu ku guuleystay kahor inta uusan tartanka bilaabanin.
Sawirkan ayaa haatan laga heli heli karaa wakaaladda sawirada ee Getty Images, waxaana sidoo kale loo adeegsdaay maqaalo laga qoray booqashada Trump toddobaadyo kahor safarkiisa.
Warbaahinta Mareykanka ayaa markiiba ogaatay in sawirka la qaaday 16 sano kahor, waxaana taas ay keentay Parscale uu tirtiro sawirkii hore oo uu ku badelo midkale oo ah booqashada Trump.
Kooxda ololaha doorashada ee madaxweyne Trump kama aanay jawaabin waxa ku kalifay inay adeegsadaan sawir la qaaday waa hore.
'Khaladkii sirdoonka Iiraan ee lagu qarxiyay Markabkii shidaalka ee Israa’iil'
"Haddii aan lacagta bixin waayo kelideyda ayay u imaanayaan"
36 Daqiiqadood ka hor
Waa tuma gabadha heesaaga ah ee bilyaneerka noqotay?